गिरान्चौर एकिकृत बस्ती बनाउन सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने दिण्डुले खोले यस्तो रहस्य ? - Purbeli News
गिरान्चौर एकिकृत बस्ती बनाउन सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने दिण्डुले खोले यस्तो रहस्य ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ११, २०७३ समय: १२:२९:०७
गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डु लामा ह्योल्मोले ६ लाख ६ हजार ६ सय ६ रुपैँया सहयोग गरेका छन् । गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि दिण्डुले दिएको यो रकम नै धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनलाई प्राप्त अहिलेसम्मकै उच्च सहयोग हो ।
उक्त सहयोग रकम दिण्डुकी आमाको हातबाट फाउण्डेशनकी कोषाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरेलाई प्राप्त गरेकी हुन् । नुवाकोट बेतीनी ९ ग्याङमा जन्मिएर दिण्डु, हाल हाइल्याण्ड उत्तर क्यालीफोर्नीया अमेरिकामा होटल व्यावसाय गरीरहेका छन् । उनले गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि अमेरिकाबाट सहयोग गर्नेको संख्या निकै कम रहेकाले उक्त सहयोग गरेको बताएका छन् ।
यदि अमेरिका बस्ने नेपालीले मात्र दिल खोलेर सहयोग गर्ने हो भने गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माणका लागि मनग्गे सहयोग जुट्ने भएपनि सहयोग गर्नेहरु सेलाएकाले आफ्नो तर्फबाट सकेको सहयोग गरेको उनको भनाई छ । पहिला पनि बस्ती बसाएर देखाइसकेको र राष्ट्रियस्तरको कलाकारले थालेको यो अभियानमा युरोपबासी नेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीको नाम निकै कम देख्दा दुख लागेको उनले बताएका छन् ।
यस्तै, फाउण्डेशनलाई देण्डी पश्चात जापानबाट बाग्लुङका कृष्ण प्रसाद खत्रीको परिवारले ५ लाख ५ सय ५ रुपैँया सहयोग गरेका छन् । उहाँ फाउण्डेशनलाई अहिलेसम्मको उच्च सहयोग गर्ने दोश्रो व्यक्ति हुनुभएको छ । करिब ४ करोड अनुमानीत लागत रहेको गिरान्चौर एकिकृत बस्ती निर्माण गर्ने अभियानमा करिब ५० लाख रुपैँया नगद सहयोग संकलन भएको छ ।